Vaovao - Ny fampiharana ny paompy Peristaltika amin'ny fitsaboana rano maloto
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fandrosoan'ny indostrialy sy ny tanàn-dehibe dia nitombo haingana ny toekarena ara-tsosialy, saingy ny olana momba ny fandotoana taty aoriana dia nanjary olana lehibe mila vahana haingana. Ny fitsaboana maloto dia nanjary nilaina tsikelikely amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fiarovana ny loharano. singa. Noho izany, ny fampiroboroboana fatratra ny teknolojia fanodinana fako sy ny sehatry ny indostrialy dia fomba iray lehibe hisorohana ny fahalotoan'ny rano sy hanamaivanana ny tsy fahampian'ny rano. Ny fitsaboana ny maloto dia ny dingan'ny fanadiovana ny maloto mba hahafeno ny fepetra takian'ny kalitaon'ny rano amin'ny famoahana ao anaty rano iray na ampiasaina indray. Ny teknolojia fitsaboana ny maloto ankehitriny dia mizara ho fitsaboana ambaratonga voalohany sy faharoa ary fahatelo araka ny haavon'ny fitsaboana. Ny fitsaboana voalohany indrindra dia manala ireo zavatra matevina mihantona ao anaty loto. Ny fomba ara-batana dia matetika ampiasaina. Ny fitsaboana faharoa dia manala indrindra ny kôlôlidia sy ny zavatra voajanahary voafoaka ao anaty loto. Amin'ny ankapobeny, ny maloto izay mahatratra ny fitsaboana faharoa dia afaka mahafeno ny fenitra famoahana, ary matetika ampiasaina ny fomba maloto mihetsika sy ny fomba fitsaboana biofilm. Ny fitsaboana tertiary dia ny fanesorana bebe kokoa ny loto mandoto sasany, toy ny fosforôra, ny azota, ary ny loto voajanahary izay sarotra entina mandoto, ny loto maloto, ary ny otrikaretina.
Safidy marina sy azo antoka
Ny paompy peristaltika dia be mpampiasa amin'ny fizotran'ny fitsaboana maloto noho ny toetrany manokana. Ny fatra sy ny fandefasana simika azo antoka, marina ary mahomby dia tanjon'ny asa fikarakarana ny maloto rehetra, izay mitaky paompy natao hiatrehana ireo fampiharana mitaky be indrindra.
Ny paompy peristaltika dia manana fahaiza-manao matanjaka ary azo ampiasaina hampiakarana ny haavon'ny rano maloto azo tsaboina. Ny paompy peristaltika dia manana herin'ny hetra ambany ary tsy hanimba ny fahombiazan'ny flocculant rehefa mitondra flocculants mora tohina. Rehefa mamindra tsiranoka ny paompy peristaltika dia mivezivezy ao anaty fantsona fotsiny ilay tsiranoka. Rehefa mamindra ny maloto misy fotaka sy fasika dia tsy hifandray amin'ilay paompy ilay ranoka nopotsehina fa ny fantsona paompy ihany no hifandray, ka tsy hisy trangan-javatra mampikatso, izay midika fa azo ampiasaina maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny paompy, ary afaka mitovy ampiasaina amin'ny fandefasana tsiranoka samihafa amin'ny alàlan'ny fanoloana tsotra fotsiny ny fantsona paompy.
Ny paompy peristaltika dia manana fahamendrehana fampitana tsiranoka avo lenta, izay afaka miantoka ny maha-marina ny habetsaky ny ranon'ny reagent fanampiny, ka ny kalitaon'ny rano dia tsaboina tsara nefa tsy manampy singa simika be loatra. Ho fanampin'izany, ny paompy peristaltika dia ampiasaina ihany koa amin'ny fandefasana santionany voazaha toetra sy ireo mpanadihady momba ny kalitaon'ny rano sy fitaovana fanadihadiana.
Satria lasa manam-pahaizana manokana sy sarotra kokoa ny fitsaboana ny rano maloto eto an-tanàna sy ny indostrialy, manankery ny doka marina, ny fandefasana simika ary ny famindrana ny vokatra.
Fampiharana ho an'ny mpanjifa
Orinasa mikarakara rano no nampiasa paompy peristaltika ranon-javatra any Beijing Huiyu YT600J + YZ35 tamin'ny fizahana fitsapana fitsaboana biofilm mba hamindrana ireo maloto misy fotaka sy fasika mankany amin'ny fitoeran-tsolika biofilm mba hanamarinana ny fahombiazan'ny fizotran'ny fitsaboana maloto biofilm. feasibility. Mba hahavitana ilay fitsapana, dia nametraka ireto fepetra manaraka ireto amin'ny paompy peristaltika ny mpanjifa:
1. Ny paompy peristaltika dia azo ampiasaina amin'ny paompy maloto miaraka amin'ny fotaka 150mg / L nefa tsy misy fiatraikany amin'ny androm-piainan'ny paompy.
2. Halavan'ny fantson'ny rano maloto: 80L / ora farafahakeliny, 500L / ora farafahakeliny, ny fikorianana dia azo ahitsy arakaraka ny fepetra takian'ny fizotrany.
3. Ny paompy peristaltika dia azo alefa any ivelany, 24 ora isan'andro, fandidiana mitohy mandritra ny 6 volana.